Malunga Nathi-Jiangyin Chenhao Technology Co., Ltd.
Yasekwa ngo-2018, JIANGYIN CHENHAO DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. ibekwe kwisiXeko saseJiangyin, kwiPhondo laseJiangsu, kufutshane nePort Shanghai. Yi ishishini lobuchwephesha obuphezulu obusebenza kwihlabathi liphela, kwaye ukutyhubela iminyaka uhambise umthengi ngexabiso eliphezulu rhoqo ngokusika iimveliso kunye nolwazi lobuchwephesha.
Siphuhlisa, sivelise kwaye sithengise iphepha le-sublimation leenkqubo zoshicilelo lwedijithali. Ngeenzame zeqela lethu eligqwesileyo elenziwe yinkosi, oonjingalwazi kunye neenjineli eziphezulu, siye saba ngoovulindlela kwimarike yaseTshayina kwaye sele sinamalungelo athile obukrelekrele kwimveliso kunye nokusetyenziswa kwetekhnoloji yephepha le-sublimation kwaye safumana amalungelo abenzi kunye neziphumo ezininzi zelizwe. .
Nika abathengi kwihlabathi jikelele ngeyona nto ingcono umgangatho iphepha le-sublimation.
Singo umzi-mveliso ophambili wokugquma kunye iminyaka elishumi Amava emveliso yephepha le-sublimation e-China, ngoku umzi-mveliso wethu ugubungela ngaphezulu kwe-30,000 yeemitha zesikwere ngelixa imveliso yonyaka ifikelela kwiitoni ezingama-20,000. Si 5 imigca yokwaleka ngesantya esiphezulu kwimveliso yemihla ngemihla, ubukhulu becala ukuya kuthi ga kwi-320cm. Iindibano zethu zocweyo ziye I-20 ibeka ukubuyisela umva ngokuzenzekelayo kunye noomatshini bokusika, 2''core kunye ne-3''core zombini ziyafumaneka, ukuqengqeleka ubude ukuya 10,000m. Sikwanayo neseti epheleleyo yokuhlola izixhobo zokuhlola ukuqinisekisa umgangatho ukusuka kwisiseko sephepha ukuya kwimveliso yokugqibela.
Okwangoku sivelisa kakhulu iphepha le-sublimation enobunzima obahlukeneyo 35gsm-140gsm, ububanzi obahlukeneyo 21cm-320cm, kunye nobude obahlukileyo be-100-10,000m umgangatho & jumbo rolls, super sheet size A4/A3 kukwabandakanyiwe.
Yethu isebe leR&D eligqwesileyo ibisoloko izibophelele ekuphuhliseni ezahlukeneyo kwaye iphepha le-sublimation yesizukulwana esitsha ukuhlangabezana nesicelo sabathengi iimeko ezahlukeneyo zemveliso kunye nokusetyenziswa. Ngoku sinokubonelela umthengi ngeentlobo ezahlukeneyo zomgangatho ophezuluentsha iimveliso, umzi-mveliso OEM & ODM inkonzo, iipakethe zokuthumela ngenqanawa ezikumgangatho ophezulu kwaye inkxaso ye-one-stop. Enye imveliso edumileyo icebise nge-FYI.
Iphepha le-120gsm super sheet sublimation
Sokhethekileyo kumshicileli wedesktop, isipho esiqhelekileyos, iimagi, i-jigsaw, njl.
Unyulu umbala okanye ilogo yesiko eqatywe ngasemva, kulula kumthengi ukwahlula icala loshicilelo.
8.5''X11'', 8.5''X14'', 11''X17', 13''X19'', A4, A3, ubungakanani obuqhelekileyo bamkelekile.
Iphepha lombala lentshayelelo kwiphakheji likwakhona
70-100gsm ekhawulezayo eyomileyo sublimation iphepha
Eeyenzelwe ngokukodwa EPSON F umshicileli series.
Iphepha le-sublimation eligqwesileyo kwiimpahla ezininzi zefashoni, iimpahla zemidlalo.
Yoma ngokukhawuleza, i-anti-curl, umbala oqaqambileyo, izinga eliphezulu lokudluliselwa> 95%. Ukusebenza okugqwesileyo kwe-lay-flat kunye nokusebenza ekushicileleni nasekudluliseleni.
Isicelo esingakumbi nceda uqhagamshelane nathi, Umnxeba: 0086 18861612732, Email: info@jyaonaisi.com.